स्तन क्यान्सरका यी लक्षणहरु जुन कुरामा महिलाले खासै ध्यान दिएका हुँदैनन् – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/स्तन क्यान्सरका यी लक्षणहरु जुन कुरामा महिलाले खासै ध्यान दिएका हुँदैनन्
स्तन क्यान्सरका यी लक्षणहरु जुन कुरामा महिलाले खासै ध्यान दिएका हुँदैनन्
2,1594minutes read
शरीरको कुनै भागको कोशिकामा आउने असामान्य परिवर्तन तथा अनियन्त्रित बृद्धिलाई क्यान्सर भनिन्छ । बदलिँदो जीवन शैली खानपान, यौन जीवन, अनेकौ औषधिले महिलाको सबै भन्दा सुन्दर मानिने अंग स्तनलाइ क्यान्सरले कुरूप बनाउने मात्र नभई उनीहरुको ज्यानै लिने क्रम बढेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा वर्षेनी एक लाखमा २१.८ महिलामा स्तन क्यान्सर हुन्छ । तीमध्ये १० जनाको मृत्यु हुन्छ। महिलामा हुने सम्पूर्ण क्यान्सरजन्य मृत्युमध्ये २० प्रतिशत मृत्यु स्तन क्यान्सरले गराउँछ ।
स्तन क्यान्सर अमेरिका र यूरोपभन्दा एशिया एवं अफ्रिकामा कम देखा परे पनि यस सम्बन्धी जनचेतनाको कमी, गरीबी तथा महिला शिक्षाको कमीका कारण ढिलो गरी पहिचान हुन्छ । त्यो बेलासम्ममा स्तनको क्यान्सर हड्डी, फोक्सो, कलेजो, डिम्बाशय र स्नायु प्रणाली ९दिमाग० सम्म फैलिसक्छ र महिलाले ज्यान गुमाउछन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
स्तन क्यान्सर के हो ?
स्तन क्यान्सर महिलामा हुने डरलाग्दो रोग हो। नेपालमा यस रोगबाट वर्षेनि थुप्रै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। हामीकहाँ क्यान्सर सम्बन्धी वास्ताविक तथ्यांक थाहा नभए तापनि केन्द्रीय स्तरका अस्पतालहरुको तथ्याङ्कअनुसार महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पछिको सबैभन्दा बढी हुने स्तन क्यान्सर हो। स्तन क्यान्सर सरुवा रोग होइन। तर केही स्तन क्यान्सर वंशानुगत (१० प्रतिशत भन्दा कम) हुन सक्छ।
स्तन वा काखिमा गाँठो छामिनु सबैभन्दा बढी देखिने लक्षण हो। सबै गाँठा क्यान्सर हुदैनन्, तर क्यान्सर हैन भनेर छुट्याउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ।
महिनावारी सँगै गाँठो सानो-ठूलो नहुनु, धेरै नदुख्नु, गाँठो स्तन भन्दा बढी कडा हुनु, बाहिर छाला वा भित्र मासु सँग जोडिएको जस्तो महसुस हुनु, स्तनको आकार बिग्रिनु, स्तनको छालामा डिम्पल वा खाल्डाखुल्डी पर्नु, रातो हुनु, धेरै चिलाउनु, स्तनको मुन्टोको आकार बिग्रीनु, चिरा पर्नु वा रगत आउनुले स्तन क्यान्सर तर्फ संकेत गर्दछ।
शरीरको अन्य कुनै अé जस्तै स्तन पनि खास कार्य गर्नलाई विभिन्न कोषहरुले बनेको हुन्छ। स्तन शरीरको बाहिरी भागमा रहेकोले यसमा भएका परिवर्तनलाई सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर कुनै किसिमका कोषहरु अनावश्यक रुपमा बढ्दै गयो भने यी नयाँ कोषको समुहलाई स्तन ट्यमर अथवा गाँठो भनिन्छ। हुन त स्तनमा हुने सबै गाँठाहरु क्यान्सर हुँदैनन्। लगभग १० प्रतिशत गाँठाहरु मात्र क्यान्सर हुन्छन्।
तर स्तनमा कुनै किसिमका गाँठाहरु भेटियो भने चिकित्सकसँग परामर्स गरी यसको निवारण गर्नु उचित हुन्छ। सायद अज्ञानताको कारणले गर्दा होला, स्तनमा सानो गाँठो खासगरी नदुख्ने गाँठो (जसमा क्यान्सर हुने बढी सम्भावना हुन्छ) हो भने प्रायःजसो महिलाहरु चिकित्सककहाँ जाँदैनन्। जब क्यान्सरले गर्दा गाँठो ठुलो भई अप्ठ्यारो हुने, फुटेर घाउ हुने तथा क्यान्सर फैलिसकेपछिका लक्षणहरु देखा परेपछि मात्र स्वास्थ्य संस्थामा गएको देखिन्छ।
स्तन क्यान्सरको कारण
स्तन क्यान्सर चालिस वर्ष भन्दा माथिका महिलाहरुलाई हुने संभावना बढी हुन्छ । तर, अहिले कम उमेरको महिलामा पनि स्तन क्यान्सरको जोखिम बढेको छ । विभिन्न कारणहरुमा सानै उमेरमा महिनावारी सुरु भएका र ढिलो उमेरसम्म हुनेलाई पनि स्तन क्यान्सर हुने सम्भावाना रहन्छ । स्तन क्यान्सर हर्मनमा निर्भर हुने भएकाले र महिनावारी हर्मनसँग सम्बन्धित भएका कारण लामो समयसम्म हर्मोनसँग एक्स्पोज हुँदा क्यान्सर हुने खतरा रहन्छ । यसैगरी बच्चा नभएका, पहिलो बच्चा ३० वर्षभन्दा पछि जन्माउनेहरुमा पनि जोखिममा हुन्छ ।
स्तनको सौन्दर्य गुम्ने चिन्ताले वा दूध नआएर र अरु कुनै बाध्यताले सन्तान भएपनि कतिपयले स्तनपान गराउँदैनन् । यो समूहका महिलालाई पनि स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ । करिब १० प्रतिशतमा वशांणुगत कारणले स्तन क्यान्सर हुन्छ । यदि परिवारमा आमा वा दिदीबहिनीलाई छ भने उक्त परिवारका अन्य महिलालाई हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यसैगरी हर्मनयुक्त औषधि खाने, परिवार नियोजनका औषधि लामो समय सेवन गर्ने, हर्मन रिप्लेसमेन्ट पिल (एचआरटी) सेवन गर्नेलाई पनि स्तन क्यान्सर हुने खतरा अन्य महिलाको तुलनामा बढी हुन्छ । मोटोपन, धुमपान, मद्यपान पनि यसका कारक हुन् । साथै, विवाह नगरेका, बच्चा नजन्माएका, बच्चा पाएर स्तनपान नगराएका र पहिले एउटा स्तनमा क्यान्सर भइसकेका महिलामा पनि स्तन क्यान्सर जोखिम उच्च हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।
स्तनमा गिर्खा हुनु, स्तनको आकारमा परिवर्तन, मुन्टाबाट रगत वा पिप बग्नु, स्तनको छालामा सुन्तलाको बोक्रामा जस्तो स–साना प्वाल देखिनु, मुन्टा भित्र धसिनु आदि स्तन क्यान्सरका लक्षण हुन्। यस्ता लक्षण देखिइसक्दा पनि दुखाइ भने प्रायः नहुने भएकाले स्तन क्यान्सरले धेरैलाई झुक्याउने डा सुजाता हिराचन बताउनु हुन्छ ।
स्तन क्यान्सरका लक्षणहरु केके हुन्?
स्तन क्यान्सरको सुरुको अवस्थामा कुनै पनि लक्षण देखा पर्दैनन्। सामान्यतया दुख्न पनि दुख्दैन। विभिन्न जाँचहरुबाट मात्रै यस अवस्थाको क्यान्सर पत्ता लाग्दछ। हाम्रो समाजमा केही समस्या नभई स्वास्थ्य परीक्षण गराउने चलन छैन। जब क्यान्सर बढ्न थाल्छ, यसले स्तनमा परिवर्तन ल्याउँछ जसलाई एउटी महिलाले थाहा पाउन सक्नेछिन्। स्तन अथवा काखीमा प्रायः नदुख्ने साह्रो गाँठो हुनु स्तन क्यान्सरको मुख्य लक्षण हो। अन्य लक्षणहरुमा स्तनमा निको नहुने घाउ, दुधको मुन्टोवाट असामान्य चिज बग्नु, स्तनमा दुख्ने गाँठो तथा दुधको मुन्टोमा परिवर्तन आउनु अथवा कहिलेकाहीं झरेर जानु आदि।
स्तन क्यान्सरको अवस्था कसरी पत्ता लगाउने ?
सायद अज्ञानताका कारणले गर्दा होला नेपाली महिलाले स्तनमा हुने गरेका साधारण खालको समस्या कमैलाई भन्न चाहन्छन्। पुरुष चिकित्सक कहाँ जँचाउन जाँदैनन्। जब स्तन क्यान्सर बढेर थाहा पाइने हुन्छ, तब अवस्था नराम्रो भइसकेको हुन्छ। स्तन क्यान्सर शरीरका अन्य भागमा सरिसकेको अवस्थामा रोग निको पार्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सुरुको अवस्थामा थाहा हुने हो भने स्तन क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ।
विकसित देशहरुमा भने प्रायजसो बिरामी सुरुको अवस्थामा चिकित्सककहाँ पुग्छन् जसले गर्दा क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ। यसका मुख्य कारण भनेको क्यान्सर जनचेतनालाई लिन सकिन्छ। अन्य कारणहरुमा विकसित देशमा गरिने भरपर्दाे स्तन क्यान्सर समुहगत परिक्षण पनि हो। यस विधिद्वारा स्तन क्यान्सर प्रारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
आफ्नो स्तनको आफैले गर्ने जाँचका ५ विधिहरु
सेल्फ ब्रेस्ट इक्जाम अर्थात् आफैले गर्ने स्तनको जाँचमा महिलाले आफ्नो स्तनका हरेक भागलाई पालैपालो छामेर जाँच गर्ने गरिन्छ। हरेक महिना यस्तो जाँच आफै गर्ने तथा कुनै शंका लागेमा चिकित्सकको परामर्श लिने गर्नुपर्दछ।
पहिलोः ऐना अगाडि कपडा फुकालेर आफ्नो स्तन हेर्ने र कुनै अस्वभाविक आकार, रंग, डिम्पल, स्तनको मुन्टोको आकार के छ भनेर हेर्ने।
दोस्रोः अब आफ्नो दुबै हात माथी उचालेर आफ्नो स्तन र काखिलाइ नियाल्ने।
तेस्रोः हात माथी उचालेको बेला स्तनको मुन्टोबाट कुनै पानी, दूध वा रगत आएको नियाल्ने।
चौथो: खाटमा पल्टिएर आफ्नो स्तनलाई अर्को पट्टिको हातले नरम र गोलाकार रुपमा हरेक भाग लाई छाम्ने। त्यस्तै काखिलाई पनि छाम्ने।यसरी छाम्दा स्तनको कुनै भाग पनि नछुट्ने गरि छम्ने।
पाचौः उभिएर वा बसेर चौथो विधि अनुसार स्तनलाई चारैतिर छाम्ने। नुहाउने बेला समेत यो गर्न मिल्छ।
विभिन्न अनलाइनहरुको सहयोगमा
हत्केलामा त्रिशूलको चिन्ह छ ? उसोभए छिट्टै चम्किदैछ तपाईको भाग्य !
आफ्नो जन्मकुण्डली र राशी अनुसार बोक्नुहोस पर्स, कहिल्यै पैसा को कमि हुदैन
छाला चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
दादको समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् हप्ता दिनमै छुटकारा पाउने अचुक उपाय
छालामा निस्किएका डल्ला हप्ता दिनमै हटाउने यस्ता छन् घरेलु उपाय